Apple dia nanolotra hacker ho an'ny fanampiany tamin'ny $ 75.000 | Vaovao IPhone
Apple dia nanome $ 75.000 ho an'ny hacker ho an'ny fanampiana
Ampifandraisintsika rehetra ilay teny mpijirika toy ny sary sarona, olona mahatsiravina, mitafy mainty, izay mampiasa ny fahaizan'ny solosainy hanao ratsy na aiza na aiza itiavany azy, mamorona virus, malware ary miditra an-tsokosoko amin'ireo rindrin'ny rindrin'ny rafitra fiarovana.
Eny, tsy hisy izany. Ny mpijirika dia mpahay siansa amin'ny informatika fotsiny cyber security, afaka mandingana ny hidy dizitaly. Ary toy ny amin'ny vondrona rehetra, misy olona tsara sy olona ratsy fanahy. Ny iray amin'ireo tovolahy tsara dia nanampy an'i Apple nanidy varavarana Safari tsy nanokatra, ary nomen'ny orinasa valisoa azy izany.
Andro tsara iray mpahay siansa amin'ny solosaina Ryan pickren nanomboka nitady ambadiky ny tranokala Apple Safari izy. Taorian'ny asa mafy dia hitany fa marefo ny kaody fampiharana ary nahavita niditra tamin'ny fakantsary sy mikrônônan'ny mpampiasa rehetra izy. Ny hany sisa nataon'ilay niharam-boina dia ny niditra tao amin'ny tranonkalany.
Apple dia manana antoka faniriana amin'ny filaminana ny rindrambaiko sy ny fitaovanao. Ny marina dia afaka mirehareha amin'izany ianao, ary io dia iray amin'ireo mampiavaka ny marika. Niteraka olana tamin'ny governemanta amerikana mihitsy aza izany noho ny fiarovana ny angon-drakitra ampiasain'ny mpampiasa azy rehetra, araka ny tokony ho izy.
Saingy tsy ny trosa rehetra no mandeha any amin'ireo injeniera Cupertino. Indraindray izy ireo dia ampian'ny hackers ivelany izay miara-miasa amin'ny Programme Bug Bounty izany Apple dia manana an'io tanjona io. I Pickren, tamin'ny alàlan'ny fandaharana, dia nampandre an'i Apple ny zavatra hitany, ary nahazo $ 75.000.
Tsy nahita afa-tsy ilay mpijirika marefo fito ao Safari, ny telo izay mamela ny fidirana amin'ny fakantsary iPhone amin'ny alàlan'ny kaody ratsy. Ny hany sisa nataon'ilay niharam-boina dia ny fidirana tao amin'ny tranonkalany, ary afaka niditra tao amin'ny fakantsary sy mikrô lavitra i Pickren. Saika tsy misy.
Afaka niditra fakantsary ilay mpijirika rehefa nitsidika ny tranokalany
Nanamboatra haingana ny olana i Apple
Tamin'ny volana Desambra dia nampandre ny orinasa ny zavatra hitany i Pickren. Ireo bug telo tena matotra indrindra dia namboarin'i Apple tamin'ny volana Janoary niaraka tamin'ny fanavaozana ny Safari 13.0.5. Ireo lesoka hafa tsy dia matotra dia namboarina tamin'ny 24 martsa niaraka tamin'ny fanavaozana ny Safari 13.1.
Apple dia nanome fahafaham-po ny fanampiana voaray avy amin'ny mpijirika $ 75.000. Pickren, faly amin'izany, dia namoaka fa hanambola ampahany amin'ny vola amin'ny fividianana fitaovana vaovao izy hanohizana ny famotopotorana sy ny fitadiavana fomba vaovao hanodinkodinana ilay rafitra. Iza no mahalala raha nahita varavarana fito mahery izy….
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » IPhone Security » Apple dia nanome $ 75.000 ho an'ny hacker ho an'ny fanampiana
NURVV Run, modely marani-tsaina ahitana ratra
Ny chip T2 dia mampangina ny micro an'ny iPad Pro ka tsy afaka mitsikilo antsika izy ireo